अर्थ/विकास – Page2– KarnaliPost Daily
२७ पुष २०७६, आईतवार ११:०३२७ पुष २०७६, आईतवार ११:०३२७ पुष २०७६, आईतवार ११:०३ by Karnali Post DailyNo Comments
कर्मशील यूवाबाटै कर्णालीको परनिर्भता अन्त्य हुन्छ ःमन्त्री भण्डारी
अर्थ/विकास, प्रदेश न. ६
सागर परियार, जुम्ला । कर्णालीमा २ दिने प्रदेश स्तरी यूवा सम्मेलन शुरु भएको छ । युवा उद्यमशिलता, दिगो विकासमा युवाको सहभागितालाई सुनिश्चिता, रोजगारीका लागि बाहिरीएका युवालाई घर फर्काउन आह्वान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । सम्मेलनको उद्घाटख गर्दै कर्णालीका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पहिलो प्रथामिकता युवालाई घर फर्काउने, दोस्रो कर्मशील भएर संघिय सरकारको अनुदानमा भईरहेको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे । आर्थिक रुपमा समृद्ध प्रदेश,सुखारी कर्णालीबासी बनाउन युवा शक्तिलाई सक्षम र उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कर्णालीमा कृषि, पर्यटन, व्यापार व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । तर कर्मशलि यूवाको अभावले परनिर्भरता बढेको छ । कर्णालीको परनिर्भता अन्त्य आर्थिक समृद्धीका लागि युवा उद्यमशलितालाई जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको तर्क दिए । दुई दिन सम्म संचालन हुने सम्मे
२७ पुष २०७६, आईतवार ०८:४०२७ पुष २०७६, आईतवार ०८:४०२७ पुष २०७६, आईतवार ०८:४० by Karnali Post DailyNo Comments
काठमान्डौ । यात्रासँगै पार्टी गर्न मिल्ने बस नेपालमा औपचारिक रूपमा भित्रिएको छ । रेस नेपालले पार्टी गर्न मिल्ने २ वटा बसको शुक्रबार उद्घाटन गरेको हो । पार्टी गर्न रुचाउनेलाई लक्षित गरी नेपालमा पनि फरक शैलीको पार्टी बस सञ्चालनमा आउने भएको हो । ३६ जना सिट क्षमताको उक्त बसभित्र म्युजिक सिस्टम छ, बस्नका लागि सोफा राखिएको छ, आकर्षक ढंगले सजाइएको बार पनि छ । बसभित्रै प्रोफेसनल हाइफाइ डीजे म्युजिक सिस्टम छ, स्मोकिङका लागि छुट्टै क्याबिन छ, पोल डान्सका लागि छुट्टै ठाउँ छ भने मोबाइल चार्ज गर्नका लागि पनि सेवा छ साथै बस पूरै वातानुकूलित हुनेछ । आगामी १ सातामा बस बालाजुस्थित भाटभटेनीबाट गुड्न सुरु हुनेछ भने विभिन्न ठाउँमा यात्रुलाई लिएर २ घण्टासम्म काठमाडौं सहर चहार्नेछ । जसका लागि प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । १ हजार रुपैयाँ तिरिसकेपछि तपाईंले बसभित्र प्रवेश पाउनु हुने
२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:५१२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:५१२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:५१ by Karnali Post DailyNo Comments
छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले ग्रामिण महिला खुसी
छोरी सुरक्षाका लागि स्थानीयतहमा पठायो चार करोड सागर परियार, कर्णाली सरकारले लागु गरेको छोरी सुरक्षाका लागि बैंक खाता कार्यक्रम गाउँगाउँमा शुरु भएको छ । छोटो समयमा पनि धेरै लोकप्रिय भएको छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले छोराछोरी बीचको लैगिक विभेदलाई पनि कम गर्दै गएको छ । जुम्लाकै दुर्गम मानिने कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम शुरुले महिलाले राहत महसुश गरेका छन् । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ सञ्ज्यलवाडाकी शान्ति सञ्ज्यालकी साउन १३ गते छोरी जन्मिँदा दुःखी भइन् । समाजमा छोराछोरीबीच गरिने विभेदले उनी निकै चिन्तीत थिईन् । छोरी जन्माएको भन्दै घरका समाजले वास्त गर्थेन् । उनले भनिन, सरकारले छोरी जन्मीए खाता खोलिदिने खबर पाए । त्यसपछि गाउँपालिका कार्यालय गँदा सबैले छोरी जन्माएकोमा हजुरलाई बधाई छ । अब गाउँपालिकाले छोरी र आमाको नाममा खाता खोलिदिँदै छ । भने, प्रत्येक महिना छोरीको नाममा ५
२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:४४२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:४४२७ पुष २०७६, आईतवार ०७:४४ by Karnali Post DailyNo Comments
बाध्यताले कालापहाड पुगेका ४० हजार नेपाली कामदारका पिडा, मलम लगाउदै एकता समाज
अर्थ/विकास, स्थानिय तह
सागर परियार,भारत हिमाचल प्रदेशबाट । जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका २ का हर्केश दमाई भारतको हिमाचल आउन थालेको करिब डेड दशक भैईसक्यो । उनी हिमाचल प्रदेशको किनौर जिल्लाको एक भाडा पसलमा काम गर्छन् । त्यहि कमाईबाट उनको घर व्यवहार चलेको छ । साथै जुम्लाका रतन तिरुवा पनि भारतमा काम गर्न थालेको एक दशक बित्यो । घरमा रोजगारीको कुनै उपाय लागेन उनले भने, धेरै कमाउ भनेर अन्य देश जान आर्थिक अबस्थाले पुगेन अन्तिम विकल्पका रुपमा भारतमा आएर काम गर्न शुरु गरेको सुनाए । साथै रुकुम पश्चिमका नारायण विष्ट पनि हिमाचलमा भारी बोक्ने काम गर्छन् । उनले भने भारत आएको ९ वर्ष बित्यो, स्थानीय सरकार आएपछि बीचमम घर गए । तर रोजगारीको कुनै मावल राम्रो नदेखेपछि फेरि फर्किएको उनको भनाई छ । साथै जुम्लाका बल बहादुर दमाई पनि (पल्लीदारी) भारी बोक्छन् । तीन छोरा श्रीमतीको लालन पालनका लागि भारतकै कमाईलेनै धानेको बताए । त्
२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:२७२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:२७२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:२७ by Karnali Post DailyNo Comments
रैथानेबाली लोप हुँदा किसान चिन्तीत, जोगाउने स्थानीतहका योजना मात्रै सागर परियार÷;हस्त बुढा, जुम्लामा उत्पादन हुँदै आएको रैथाने अन्नबाली लोपोन्मुख हुँदै गएपछि जुम्लाका किसान चिन्तीत भएका छन् । पहिला सबैका घरघरमा पाईने, चिनो कागुनो, फापर,मार्से, गहत, कालो भट्मास लगायत शरिरलाई पोषण दिने रैथाने अन्न उत्पादनै हुन छाडेपछि लोपउन्मुख भएको हो । जसले गर्दा अहिले रैथानेबालीको बीउ पनि पाउन छोडेपछि किसान चिन्तामा रहेको स्थानीय मक्करे बुढाले बताए । केही वर्ष अघि सबै खाले रैथाने अन्न बाली उत्पादन हुने उनको घरमा आजभोली आयातित खाधन्न मात्रै छ । ‘पहिला घरमा अपुगको भएको रासन तराईबाट भेडारबाख्रा, खच्चर र घोडाबाट ल्याउने गरिन्थ्यो । तातोपानी गाउँपालिका–७ का तिलक बुढाले भने, ‘अहिले तराईको चामल नखाने घर कोही पनि बाँकी रहेनन् । आफ्नो जग्गा बाझो राखेर भएपनि विकासी चामल खाने बानी परे
२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:१२२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:१२२६ पुष २०७६, शनिबार ०७:१२ by Karnali Post DailyNo Comments
यी हुन् भ्रमण वर्ष २०२० का लागि सात प्रदेशका पर्यटकिय १०० गन्तव्य
कर्णाली पोष्ट जुम्ला । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’को लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरमा १०० वटा पर्यटकिय गन्तव्य सूचि सार्वजनिक गरेको छ । भ्रमण वर्षभरीमा २० लाख पर्यटक भित्राउने नेपाल सरकारको लक्ष्य सहित पर्यटकिय गन्तव्यको घोषणा गरेको हो । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा सरकराले देशैभर आन्तारिक तथा बाहिरी पर्यटकहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना सहित भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशरथ रङ्गशालामा आयोजित भव्य समारोहबीच भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेकी थिइन् । भ्रमण वर्षकोलागि सात वटै प्रदेका ७७ जिल्लाका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा घोषणा गरिएका ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढिरहेको मन्त्रालायले जनाएको छ। सरकारले घोषणा गरेका सात प्रदेशका ७७ जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यको सूची । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४०२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४०२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४० by Karnali Post DailyNo Comments
जुम्लामा हिमपात, जनजीवन कष्टकर (फोटोफिचर)
अर्थ/विकास, कृर्षि, प्रदेश न. ६, समाज
जुम्ला ः कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा बिहिवार दिउँसोदेखि हिमपात भएपनि जुम्लामा भने शुक्रबार विहान देखि मात्रै हिउ पर्न थालेको छ । यहाँ विहानै देखि हिमपात भएपछि अत्याधिक चिसो बढेको छ हो । चिसोका कारण कर्णालीका जिल्लाहरुमा जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । हिमपातले कृषक भने उत्साहित छन् । समयमै हिउँ र बर्षा हुदा हिउदे बाली जौँ गहु सप्रने भन्दै कृषक उत्साहित भएका हुन् । अहिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँले डाँडाकाँडा सेताम्य भएका छन् । निरन्तर हिमपात भइरहेकोले गाइबस्तु गोठ भन्दा बाहिर निकाल्न सकिएको अवस्था छैन् । हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । चिसोको मार बालबालिका र बृद्धबृद्धामा बढी परेका छन् । जुम्लामा पहिलो पटक हिमपात भएको हो । धुलो र धुवाका कारण मौसमी रुघाखोकीको प्रकोप बढ्ने संभावना थियो तर हिमपात भएपछि हराउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय कृष
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:४४२४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:४४२४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:४४ by Karnali Post DailyNo Comments
त्रिवेणी पक्की पुल ः दुई बर्षमा बनाउनुपर्ने पुल साढे तीन बर्षसम्म दुइ पिलर मात्रै
जुम्ला ः तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणीस्थित तिला नदीमा पुल निर्माण हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका थिए । तर, दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल साढे तीन वर्षसम्म पिलर मात्रै बनेपछि चिन्तित बनेका छन् । तिला नदीको पुल निर्माणका लागि ५ असार, ०७३ मा चीराचन्द अञ्जली भेजी कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड ९६ लाख ८० हजार रुपैयाँमा भएको सम्झौतामा २३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म पिलर मात्रै निर्माण भएको स्थानीय शान्तिनाथ योगीले बताए । ‘दुई पिलर मात्रै निर्माण भएका छन, आवतजावत गर्न झन् समस्या भएको छ,’ उनले भने । तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणी, ताम्ती टोप्ला हुँदै जाजरकोट, सुर्खेतको छिन्चु जोड्ने सडकका लागि पुल निर्माण हुन लागेको हो । तर, समयमै निर्माण नहुँदा समस्या भएको तिला गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सिंहबहादुर बुढाले बताए । ‘अहिले पुल अलपत्र अवस्थ
२२ मंसिर २०७६, आईतवार १२:१९२२ मंसिर २०७६, आईतवार १२:१९२२ मंसिर २०७६, आईतवार १२:१९ by Karnali Post DailyNo Comments
दियालो सहकारीको निक्षेप साढे आठ करोड
जुम्ला २१ मङ्सिर ः दियालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जुम्लाको आर्थिक कारोबार ८ करोड ७९ लाख ६० हजार ३ सय ५० रुपैया ४० रुपैया पुगेको छ । विगत १२ बर्ष अधि स्थापना भएको सहकारीको हालसम्म निक्षेप साढे ८ करोड बढी रहेको छ । शनिबार सम्पन्न सहकारीको १२ औँ बार्षिक साधारण सभामा संस्था अध्यक्ष किशोर न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्माको प्रमुख आथित्य तथा सहकारी अध्यक्ष किशोर न्यौपानेको सभाध्यक्षमा बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । देशको आर्थिक क्षेत्रका तीन खम्बा नीति अनुसार विगत १२ बर्ष अधि यस सहकारीको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्थापना गरिएको हो । आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा शेयरपुजी ५६ लाख ८१ हजार ५ सय रहेको थियो । गत आर्थिक बर्ष ०६५÷०७६ को अन्त्यसम्म ९१ लख १६ हजार १ सय पुगेको र अहिले पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १ करोड १० लाख रहेक
२२ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:४०२२ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:४०२२ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:४० by Karnali Post DailyNo Comments
दसैंमा जुम्लाकाे अर्ग्यानिक स्याउ बेच्न भ्याइनभ्याई
जुम्लाको सिँजा गाउँपालिका ६ गोरा गाउँका रामसिंह रावललाई दसैंमा स्याउ बेच्न भ्याइनभ्याई छ । गाउँमा रमाउने पर्वका बेलामा पनि रावल भने काठमाडौंमा स्याउ बेच्न व्यस्त छन् । उनले दसैंलाई लक्ष्य गरेर सात टन स्याउ काठमाडाैं पुर्‍याएका थिए । अग्र्यानिक स्याउ खेतीका अभियन्ता रावल आफ्नै बगैंचामा उत्पादन भएका फलको बजार विस्तारको लागि जुटेका छन् । काठमाडौं पुर्‍याएर १ सय ५० रुपैयाँ किलोमा स्याउ बेचिरहेको उनले बताए । अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका रावलले जुम्लामा स्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी एक हजार स्याउ, ओखर र आरुको व्यवस्थित बगैंचा बनाएका छन् । जुम्लाको स्याउ बजारीकरणमा राज्यले कुनै दायित्व नलिएकाले किसानले नै उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
नागरिकको असहयोगनै विपद व्यवस्थापनको चुनौती ः मेयर सेजुवाल
सरकारमाथि निगरानी बढाउन छायामन्त्रीलाई देउवाको निर्देशन
नसर्ने रोग बारे अभिमुखिकरण
सामाजिक कुरिती हटाउन जुम्लामा महायज्ञ
कर्णाली उत्सव ःकर्णाली चिनाउने बौद्धिक बहस
असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर पदको लिखित तथा मौखिक परिक्षा सम्बन्धी सूचना